जन्म कुण्डलीबाट दुर्घटना र बच्ने उपाय यसरी थाहा पाउनुहोस् | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ असार २०७६, बिहीबार १७:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । तपाईंको जन्म कुण्डली तपाईंको अतित, वर्तमान र भविष्यको ऐना हो । तपाईंले भविष्यमा कस्तो समस्याको सामना गर्नुहुन्छ, कुन समय कुन घटनाले तपाईंको जीवनलाई कस्तो मोडमा पुर्‍याईदिन्छ । यो सब कुण्डलीको मूल्यांकनबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
कुण्डली जाँच्नु एउटा गहन कार्य हो, यसको कारण हो ज्योतिष अपवाद, जसको कारणले एकै किसिमको कुण्डली भएको मानिसहरुको जीवन अलग-अलग हुन जान्छ । ज्योतिषशास्त्र एउटा जटिल विद्या हो, शायद त्यसैले धेरैजसो ज्योतिषाचार्य खोक्रो रूपमा जाँचेर भविष्यवाणी गर्दिने गर्छन् । जुन धेरैजसो अवस्थामा हानिकारक सावित हुन्छ ।
त्यसैले भन्ने गरिन्छ कि ज्योतिषमा धेरथोर कुराहरु थाहा हुनुपर्छ । घटना र दुर्घटना जुनसुकै अवस्थामा पनि कुण्डलीद्वारा कुन समयमा हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
आज हामी तपाइलाईं बताउछौँ । तपाईंको कुण्डलीको आधारमा जीवनमा हुने दुर्घटनाको योगलाई कसरी जान्न र बुझ्न सकिन्छ ? जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा छैटौं र आठौं भावका स्वामी अशुभ ग्रहको साथमा बसेको हुन्छ यस्तो व्यक्तिको जीवनमा दुर्घटना घट्ने सम्भावना अत्यधिक हुनसक्छ ।
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार दुर्घटनाको सिँधा सम्बन्ध लग्न र लग्नेशसँग हुन्छ ।
लग्नको अर्थ शरीर हुन्छ, त्यसैले यस्तो भन्ने गरिन्छ कि लग्नमा शुभ ग्रह हुनु उत्तम हुन्छ । मारक वा अशुभ ग्रहले जब लग्न र लग्नेशमा गोचर गर्छन् त्यो व्यक्ति दुर्घटनाको चपेटामा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । यदि त्यहरु मारक ग्रहको अन्तरदशा चलिरहेको छ भने जातकमा दुःख र कष्ट पुग्ने योग बन्छ ।
मंगल र शनि ग्रह मिलेर दुर्घटनाको योग बनाउँछन् । त्यही लग्न अथवा दोस्रो भावमा राहु र मंगल सामेल छन् भने दुर्घटनाको योग बन्छ । लग्नमा शनि र मंगल ग्रह हुनु अशुभ संकेत हो । तेस्रो भावमा मंगल र शनि छ भने पनि घातक साबित हुन्छ ।
जसको जन्म हुन्छ उसको मृत्यु पनि तय भएकै हुन्छ, तर असामयिक मृत्यु र शारीरिक पिडाबाट बच्नको लागि तपाईं केहि उपायहरु अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
हनुमान जी को आराधनाले आउने खतरा टाढा हुन्छन् । हनुमानको मन्दिर गएर माटोको दियोमा चमेलीको तेलको दियो बाल्नुहोस् । हनुमान मन्दिरको पुजारीसँग आफ्नो हातमा रातो डोरो बाध्नु शुभ हुन्छ । तसर्थ चराहरुलाई रातो दाल खुवाउनु पनि शुभ हुन्छ ।
आफ्नो घरको छतमा रातो झण्डा राख्नुहोस् र एउटा कागतीमा सिन्दुर लगाएर घरको छतबाट फ्याकिदिनुहोस् । नरिवलमा डोरो बाधेर हनुमान जीलाई अर्पित गर्नुस् र हनुमानको मुर्तिमा रातो फुल चढाउनुस् ।
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर ८ मा काठमाडौँमा गरेको जनसभालगत्तै पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ…
चिनी व्यापारीसँग देउवाकाे सेटिङः मोटो रकम लिएर अर्थ मन्त्रालयले नै गर्याे भन्सार दरमा दोब्बर बृद्धी !
काठमाडौं । विभिन्न चिनी व्यापारी र उद्योग सञ्चालककै योजनामा अर्थ मन्त्रालयको ठाडो…
यसरी गरिन अखिलकि अध्यक्ष तथा सांसद लामाले विवहा
काठमाडाैं । दश वर्ष अगाडि हामी कहाँ थियौरु सन् २००९ मा प्रख्यात गायक माइकल ज्याक्सन बितेका थिए, अमेरिकी राष्ट्रपति…
पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने समय छ । मिहिनेत गर्नुपर्छ,…
हुलाकको प्रभावकारिता खस्कँदो
मुगु । जिल्ला हुलाक कार्यालय मुगुबाट प्रवाह हुने सेवा खस्कँदो अवस्थामा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय मुगुले जनाएको छ ।…